Madaxtooyada Puntland oo amar culus dul-dhigaysa maanta dhamaan Wasiiradda & Shaqaalaha Puntland. - BAARGAAL.NET
Home madaxtooyada puntland Madaxtooyada Puntland oo amar culus dul-dhigaysa maanta dhamaan Wasiiradda & Shaqaalaha Puntland.
Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayaa xalay amray in dhammaan wasiiradda Xukuumaddiisu ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada Shaqaalaha wasaaradaha iyo Xarumaha dawladda, sidaas oo kalena ay dabagal ku sameeyaan qof kasta oo ay u arkaan in uu diidan yahay siyaasadda Xukuumadiisa, taas oo kamid ah arrimaha cusub ee kusoo kordhay Puntland.
Madaxtooyada Puntland oo amar culus dul-dhigaysa maanta dhamaan Wasiiradda & Shaqaalaha Puntland. Reviewed by Admin on February 06, 2020 Rating: 5
Tags : madaxtooyada puntland